Utamatisi - zemifino impikiswano kunawo ngokuya ibele. In the mpikiswano mayelana nezinzuzo zayo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka for umntwana nonina waphula umkhonto has a lot of nodokotela bezingane, gynecologists, izazi zokudla kanye nodokotela. Ngingaba utamatisi umdlezane, noma ingabe umkhiqizo kungokwalabo esigabeni ka anamahlazo ngesikhathi lactation? Ake sihlole ndawonye.
Ngingaba utamatisi umdlezane?
Okokuqala, ake sibone ukuthi yini ewusizo ngakho kuqukethwe utamatisi okubenza esisemqoka ku amatafula cishe bonke abakhileyo planethi? Utamatisi - imikhiqizo eziwusizo kakhulu umzimba womuntu. Ziqukethe ezihlukahlukene acid organic ezifana malic kanye citric kuyashesha umzimba, kanye kahle ukuthonya umsebenzi hematopoietic. aqukethe okuningi njengoba 25 kavithamini C ngayinye amagremu 100 umkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, utamatisi ezinothe ngamavithamini A, B1 kanye B6. Nokho, deliberating phezu ukuthi umama utamatisi ubuhlengikazi, sisho kunezinhlobo zasendle lokhu yemifino, futhi ngokuqinisekile ngeke ongakhetha abamba ukushisa - okuqukethwe izakhi kuyinto ephansi kakhulu.
Vegetable Inzuzo umphumela wawo ezuzisayo phezu ukugaya. Futhi nje, esikhathini utamatisi, lycopene ifakiwe - antioxidant enamandla okukhuthaza umsebenzi okunempilo yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi. Nokho, lokhu unesimo esifana yisona sizathu esikhulu esenza ukuthi kuba utamatisi kungenzeki oncelisayo. Iqiniso liwukuthi i-lycopene efanayo kuyinto allergen enamandla ukuthi kungabangela ukusabela eqinile emzimbeni wengane engaqinile uma lingena egazini futhi webele ubisi.
Manje kubalulekile ukugxila umonakalo ukuqonda yini yokuqaphela isikhundla salabo odokotela ahlangabezana akunakungatshazwa "cha" embuzweni ukuthi omunye can utamatisi oncelisayo. Ngaphandle izakhiwo ngenhla echazwe kubangele komzimba, kuyingozi uma lokhu cholelithiasis yemifino, ngoba ingabangela okubi kakhulu. Wabuye kunomthelela kwetinhlavu amatshe e nezinso esinyeni. Futhi ngokuvamile, ukwandisa asidi we esiswini abasakwazi uyakwazi utamatisi juice kuzo ngenxa okuqukethwe eliphezulu acid organic. Ngakho-ke, kulabo abaphethwe isilungulela, nazo contraindicated. Nokho, utamatisi okusemathinini ziyingozi kubo ngokwabo ngenxa lemali eliphezulu usawoti kanye uviniga, wasebenzisa njengoba kucutshunguliwe. Kodwa konke lokhu kungaba engase ukulimaza umama kuphela, futhi ngenxa yalokho, kuhlobane ngokuqondile inqubo yokondla kuphela allergenicity yabo.
Ngakho-ke, kuze kube manje, eziphambili, izazi zikholelwa ukuthi umdlezane ungadla utamatisi, uma yena akusho zihlushwa yokungezwani komzimba ukuze lo mkhiqizo. Noma kunjalo, belulekwa ukuba balandele imithetho ekusebenziseni kwabo:
- uma kukhona ukuphendula kusukela umama womntwana noma umntwana ngokushesha ngaphandle kusukela ekudleni utamatisi;
- ukukhetha imifino ezithile zonyaka - ngokuvamile inkinga ingane kwenzeka hhayi ngoba lycopene, kodwa ngenxa okuqukethwe high nitrate ku utamatisi hothouse;
- ungasebenzisi imifino esemathinini, kodwa uma ngempela ufuna - ukuba makudle omuncu futhi anosawoti, hhayi utamatisi okusemathinini ;
- sebenzisa kancane - utamatisi eziningi kakhulu musa bazuze ngisho omdala onempilo.
Amahlumela Buckwheat: izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka, ikhalori futhi inenzuzo izakhiwo
"Lexus IS 250": ukubuyekezwa abanikazi, izici lobuchwepheshe
Kanjani ukubala impesheni esizayo ngokwakho: ubukhulu, umholo, ifomula, isibonelo